जान्नुहोस् कस्ता-कस्ता हुन्छन्, एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर ? « News24 : Premium News Channel
जान्नुहोस् कस्ता-कस्ता हुन्छन्, एक्स्ट्रा म्यारिटल अफेयर ?
के भनिन्छ भने, प्रेम केवल भावना मात्र होइन, त्यो भन्दा बढी एक मस्तिष्क प्रणाली हो । जब प्रेमको कुरा आउँछ तब हाम्रो तीन मस्तिष्क प्रणाली सक्रिय हुन्छ ।
१. सेक्सको इच्छा
मस्तिष्क संरचना यस किसिमले काम गर्छ कि एक साथीका साथ जोडिएपछि, हामी गहन प्रेम र यौनको चाहाना महसुष गर्न सक्छौ । अलग-अलग व्यक्तिले विवाहेत्तर सम्बन्धकाको भिन्न भिन्नै व्यवहार गर्छन् ।
जब बिवाहि व्यक्ति अर्कोसँग शारीरिक र मानसिक रुपले जोडिन्छ भने त्यो निकै घातक हुन्छ । दुबै यौन सम्बन्ध राख्छन् । साथै भावनात्मक रुपले पनि एकाकार हुन्छन् । यस्तो सम्बन्ध विस्तारै सतहमा देखिन थाल्छ । त्यसले दाम्पत्य सम्बन्धलाई विगार्न सक्छ । किनभने उनीहरु एकअर्का बिना बाँच्नै नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्छन् ।